संविधान संशोधनमा नेकपा तयार नभए संघीय समाजवादीले सरकार छोड्ने समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न पार्टीभित्रैबाट दबाब छ । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यादवलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिइरहेका छन् २५ कात्तिक, २०७६ Share
ओली सक्रियताको अन्तर्य सारमा प्रधानमन्त्री ओली नयाँ जोस र जाँगरका साथ काम गर्न चाहन्छन् । ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पको नेतृत्व गरेका ओली आफ्नो कार्यकालमा केही न केही छाप छाड्न चाहन्छन् २४ कात्तिक, २०७६ Share
अधिकृतकी छोरी उतिबेला युवायुवतीको मन अलि 'साँँघुरो थियो, त्यसैले एकजना मात्र अटाउँँथेे । हिजोआजकाको मन आकाशजस्तै चौडा छ, धेरै अटाउँँछन्। २३ कात्तिक, २०७६ Share
बाहुनले हलो जोत्ने अभियानदेखि मार्क्सवादी चिन्तकसम्म राणाकाल, पञ्चायत, शाहवंश हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको अनुभव गरेका उनमा नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्ने आँट अझै मरिसकेको छैन । अर्थात्, वैद्यमा क्रान्तिको सपना अझै ज्युँदै छ । १६ कात्तिक, २०७६ Share
भगवान् कुकुर एउटा मिल्ने साथीजस्तै थियो काले । म भौतिक रूपमा काममा अभ्यस्त रहे पनि मन र मस्तिष्क कालेको पर्खाइमा थिएँ । तर, काले आएन । १२ बजे म घर फर्किन लाग्दासम्म मैले कालेको बाटो हेरें १० कात्तिक, २०७६ Share
चित्लाङमा चियर्स ! चित्लाङ जाने क्रममा शिरको टोपी खस्ने अजंगको पहाड देखिन्छ । काठमाडौंबाट पैदल जाँदा ४/५ घण्टामा पुगिन्छ । बल्खु, दक्षिणकाली, फर्पिङ हुँदै पनि चित्लाङ जान सकिन्छ । तर, यो बाटो अलि लामो पर्छ । बाटो भने चन्द्रागिरीतिरको भन्दा अलि सजिलो छ १ कात्तिक, २०७६ Share
महराले नैतिकतासँगै पद गुमाए, नेकपाले सभामुख प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेपछि उनी राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन् । संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी रोशनी शाहीले जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाएपछि सभामुख महराको पद धरापमा परेको हो १४ असोज, २०७६ Share
नेपालले इजरायलबाट के सिक्ने ? विप्रेषणले देश सधैं चल्ने छैन । सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल, स्वाधीन र सर्वोच्चतासहितको चाहने हो भने विदेश भागेर त्यो चाहना पूरा हुनेवाला छैन । नेपालमै मेहनत गर्ने र पैसा खोज्नुपर्ने बेला हो ३ असोज, २०७६ Share
विवादका बीच बहालवाला मन्त्री लिएर किन उड्यो बुद्ध एयर ? एयरलाइन्सका लागि यात्रुभन्दा ठूलो अरु के हुन्छ ? विभागीय मन्त्री नै भए पनि समयमा नआएपछि छोडेर हिँड्न किन सकेन ? मन्त्री आए, विवाद भयो । अब फेरि बुद्ध एयरले विवादका बीच प्लेन उडाएको छ । विवाद गर्नेलाई विमानबाट झार्न किन सकेन ? ३० भदौ, २०७६ Share
‘साहसी’ वडा अध्यक्ष उनी हुन् काठमाडौं वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष ५८ वर्षीय मोहन विष्ट । हिजोआज उनी डोजरकै आसपासमा भेटिन्छन् । बिहान ५ बजे नै फिल्डमा पुग्ने उनी राति ८ बजेसम्म वडाअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक जग्गा पहिचान तथा संरक्षणका लागि खटिरहेका छन् २३ भदौ, २०७६ Share
एटीएमबाट चाेरीः बैंककाे लापरवाही कि राज्यकाे कमजाेरी ? यी घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय हृयाकरले नेपालका बैंकलाई निशानामा राखेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले बैंकहरुलाई चिप्सवाला एटीएम प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गराएको छ । यद्यपि, सबैं बैंकले चिप्सवाला एटिएम प्रयोगमा ल्याएका छैनन्, जसका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको विज्ञहरु बताउँछन् १६ भदौ, २०७६ Share
चिनियाँ ह्याकरको निशानामा नेपाली बैंक, अधिकांश बैंकका एटिएम बन्द नेपालका अधिकांश बैंकका एटिएम बुथ ह्याक भएका छन्। शनिवार रातिदेखि अधिकांश बैंकका एटिएम बुथका मेसिनले काम गरेका छैनन्। १५ भदौ, २०७६ Share
भिख माग्दामाग्दै बलिउड स्टार अतेन्द्रले रानुले गाएको गीतको अन्तिम अन्तरामात्रै सुन्न भ्याएका थिए । उनलाई रानुको स्वरले आकर्षित गर्यो । फेरि गीत गाउन आग्रह गर्दै अतेन्द्रले रानुलाई चिया र बिस्कुट किनेर खुवाए १४ भदौ, २०७६ Share
रविको पक्षमा ! मलाई रवि लामिछाने मन पर्छन् । उनको व्यक्तित्व, आत्मविश्वासी, मिर्धा स्वाभाव, लगाव र निडरशैली नै मलाई उनी मन पर्नुका मुख्य कारण हुन् ५ भदौ, २०७६ Share
‘रवि‘ नामको व्यापार ‘रवि लामिछाने जेलभित्र यस्तो अवस्थामा’ ‘हिरासतबाट रविले मुख खोले’ ‘प्रहरीले फेला पार्यो यस्तो सनसनीपूर्ण प्रमाण, अब के हुन्छ ?' ३ भदौ, २०७६ Share
रवि लामिछाने पक्राउपछि देखिएका ‘खतरा’ विस्तारै सार्वजनिक रुपमा रविलाई राज्यसत्ता लागेरै पक्राउ गरिएको भन्नेखालका अभिव्यक्ति विपक्षी दलका नेताबाटै आउनसक्छ १ भदौ, २०७६ Share
गाउँमा ‘भान्जा आतंक’ अर्को कलेजमा पढ्न थालें । त्यहाँ छिमेकी गाउँमा ‘लड्डु’ नामले परिचित एकजना मित्र पढ्दा रहेछन् । सुरुमा उनले ‘जी’ लगाएर कुरा गरे । दुईचार दिनपछि ‘मेरो दाइको भान्जा रहेछौ’ भन्दै भान्जा नै भन्न थाले २९ साउन, २०७६ Share
१६ वर्षदेखि आफ्नै घरमा बाँधिएकी मनमाया (भिडियाेसहित) पैसा नभएकै कारण मनमायाको खुट्टाको डोरी फुकेन । पैसा अभावकै कारण मनमायाका बुबा गए, नफर्किने गरी २० साउन, २०७६ Share
थाउजेन्ड भाटको थार्ई मसाज जो कोहीलाई पनि लोभ्याउने नाइट लाइफ । बैंककसहितका ठूला सहर सेक्स टुरिजमको हब मानिन्छन् । रात रंगिएकै छ, लुट्ने र लुटाउने धन्दा चलिरहेकै छ । १८ साउन, २०७६ Share
मौद्रिक नीतिमा हाम्रो प्रमुख सुझाव नै समेटिएन : रामचन्द्र जोशी वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी सुरुमा ६५ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले बढाएर ८ अर्ब पुर्याइएको छ । लघुवित्तको अहिलेसम्म एक रुपैयाँ बढाइएको छैन । ९ साउन, २०७६ Share
भानुभक्तप्रतिको भान लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजस्ता साहित्यकारले पनि भानुभक्तलाई आदिकवि भन्न नहुने तर्क गर्न सकेनन् । अर्थात्, भानुभक्तलाई उनीहरुले कम आँकेनन् । २८ असार, २०७६ Share
इजरायलबाट हुन्डीमार्फत भित्रिँदै छ करोडौं रकम भारतीय बाटो हुँदै इजरायल छिरेका उनी अहिलेसम्म बैंक गएका छैनन् । यसको मतलव उनले पैसा नकमाएको होइन । ३ असार, २०७६ Share
लोकसेवाको विज्ञापन खारेज होला ? विपक्षीसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदले विज्ञापन खारेज गर्न दबाब बढाएका छन् भने विज्ञापनविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ । २८ जेठ, २०७६ Share
इटहरीका मेयरः मान्छे कुट्छन् विकास भन्दै गाउँ गाउँ घुम्छन् मेयर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै इटहरी–१९ का वडासचिव मनोज दाहाल र उपमहानगरपालिकाका सब ओभरसियर राम खड्कामाथि हातपात गरे २३ जेठ, २०७६ Share
निर्यातजन्य उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट ! चालू पुँजीमा ४.५ प्रतिशत ब्याजदरसहित पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन र यस कर्जाको समयावधि नवीकरण एक वर्ष कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । यस्तै, स्थिर पुँजीको कर्जा लगानीमा पनि सहुलियत ब्याजदर अर्थात् ३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी सोको भुक्तानी अवधि सात वर्ष कायम गरिनुपर्ने भनिएकाे छ २३ जेठ, २०७६ Share
खुद तलब वृद्धि : मुख्यसचिवको तलब पियनकोभन्दा ८ हजार बढी यसरी भएको तलब वृद्धिले सबैभन्दा बढी फाइदा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई भएको छ । मुख्यसचिवको तलब भने कार्यालय सहयोगी (पियन) भन्दा करिब ८ हजार रुपैयाँ मात्रै बढी हुने भएको छ । १८ जेठ, २०७६ Share
मेरी पटरानी फेरि सुन्दरता देखिने वस्तुमा होइन, हेर्ने आँखामा हुनुपर्छ । मलाई लाग्थ्यो, मेरा आँखाले धोका पाएको बिलकुल होइन । उनको मन गुलाबजस्तो सुन्दर थियो । विचार शुद्ध पानीजस्तो निर्मल थियो । मृदभाषी थिइन् । ११ जेठ, २०७६ Share
सडकमा समाजवाद उनले जंगिँदै भने, ‘उठाएर फ्याँकिदिनुपर्ला नि ।’ त्यसपछि ती पसले हतारिँदै कुर्सी र बेन्च जम्मा गर्न थाले । १ जेठ, २०७६ Share
लोकन्त्रलाई कोबाट खतरा ? नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्युनिस्टले जित्दा लोकतन्त्र कसरी संकटमा पर्छ ? बहुमतको सदुपयोग गरेर केही सिस्टम बसाउन खोज्दा लोकतन्त्रमाथि कसरी आक्रमण हुन्छ ? १० वैशाख, २०७६ 14 min read Share